जेठ ९, काठमाडौं: मङ्गलवार नेप्से परिसूचक बढेर बन्द भएको छ । अघिल्लो ५ दिनसम्म लगातार ओरालो लागेर ४२ दशमलव ८३ अङ्कले घटेको बजार यस दिन १० दशमलव ११ अङ्कले बढेको छ । २०७४/७५ आवको पूर्ण बजेट आउने दिन नजिकिन थालेपछि बजार सकारात्मक देखिएको हो । साथै, दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव स्थगित नहुने विश्वासले पनि बजारमा केही प्रभाव परेको हो ।
मङ्गलवार शेयर बजार १० दशमलव ११ अङ्क बढेको हो । सो दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत बढेर ३ सय ४५ दशमलव ५४ अङ्क पुगेको छ । कारोबार रकम रू. २५ करोड ७९ लाख बढेर रू. ७८ करोड ६६ लाख पुगेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण रू. ११ अर्बको वृद्धि भएर रू. १८ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ८० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ५४ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो र १३ कम्पनी स्थिर रहेको हो ।
सो दिन १ सय ४७ कम्पनीको ७ हजार ९ सय ७६ पटकको व्यापारबाट १० लाख १७ हजार ३ सय ५४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४८ दशमलव ८३ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव ४८ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।